ကောင်းမွန်ဝင်း: ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်
ဦးတေဇ ၏ အင်တာဗျူး
‘But I can only speak for myself’, he said, before we began the interview. ‘I have nothing to do with politics. I just do business as it’safamily tradition. The reason I’m talking to you–this is the first time I’ve spoken toaforeign journalist–is that I want it to be known once and for all that I am the wealthiest man in Burma. Too many Chinese have taken our citizenship and are now boasting they are the richest. But they’re not pure Burmese’.
⇔　ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် ၏ ပြောကြားချက်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Energy အားလုံးကို ရောင်းစားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုစက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မှာလဲ။ ဒီလိုပြောရခြင်း အကြောင်းရင်းက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုလည်းမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကာကွယ်လိုတဲ့ဆန္ဒ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အဓွန့်ရှည် တည်တံ့လိုတဲ့ဆန္ဒ၊ ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲလိုတဲ့ ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်။
Q: Don’t you feel disturbed by the poverty, the arrest of dissidents, the selling off of natural resources?
ဦးတေဇ: Sure, there are problems. We are all human, and we make mistakes. Like your prime minister (Italian PM Silvio Berlusconi), always in trouble over women. Let’s say I agree about 80 per cent with the way my country is run. The dissidents pay the price of breaking the law, and as for principles, Singapore is notademocracy either because it only has one party. I think that here in Burmaahigh percentage of the administration and the armed forces love this country and want to see it grow. Now we are much stronger than we were in the past. Besides, the military really is gradually giving way to civilians. Already, there are civilians heading regional governments rather than the highest-ranking soldier in the area.
⇔ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် ၏ ပြောကြားချက်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Energy အားလုံးကို ရောင်းစားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုစက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မှာလဲ။ ဒီလိုပြောရခြင်း အကြောင်းရင်းက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုလည်းမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကာကွယ်လိုတဲ့ဆန္ဒ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အဓွန့်ရှည် တည်တံ့လိုတဲ့ဆန္ဒ၊ ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲလိုတဲ့ ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်။ ဒီအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားသွားတဲ့ မုန်းတီးစိတ်ဖြစ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်တဲ့ အာဆီယံ၊ အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေရဲ့ မဆက်ဆံဘဲနဲ့ နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အခြေအနေ ဆိုးရွားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ တခြားမကြည့်ပါနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကိစ္စ၊ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ပတ်သတ်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပညာရှင်တွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပညာရှင်တွ ထပ်မံတွက်ချက်ဖို့ လိုတာကတော့ ဒီလိုဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် နောင်အနှစ် ၂၀၊ ၃၀ မှာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပပျောက်သွားမယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နာပြင်ဟာ နောင်အနှစ် ၂၀၊ ၃၀ မှာ တစ်ပေတက်မယ်။ မြစ်ချောင်းတွေကော လာမယ်။ စပါးစိုက်ဧကတွေ လျော့လာမယ်။ ရေချိုရရှိမှုတွေ လျော့လာမယ်။ စပါးတွေဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုရှင်းမလဲ၊ မြစ်ဝါမြစ်ရဲ့ အဓိကမြစ်ကြီးတွေမှာ ဆည်ကြီးတွေ တည်ဆောက်တဲ့အတွက် ဒါတောင်မှ ဥရောပက ပညာရှင်တွေ ခေါ်ဆောက်တာတောင် သူတို့ Problem ဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့ကြီးတွေ ရေလွှမ်းတယ်။ မန္တလေးမြို့ရေလွှမ်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မန္တလေးမြို့ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ရေပြင်အထက် စိုးရိမ်ရေအမှတ်က နှစ်ပေပဲရှိတယ်။
Q: Don’t the generals share this fear of Chinese control?
ဦးတေဇ: You can be sure of that. But people abroad don’t seem to realize that sanctions are bound to thrust us into the arms of Beijing in the end. Just the other day, China offeredaloan of 30 billion dollars, which the government hasn’t yet accepted but certainly will soon. In exchange, they will obviously get more concessions. All this is going on because you are following the ‘moral principles’ of (former US president) George Bush, who will go down in history as America’s worst ever president for the mess he made in Iraq and its consequences. But you should realize that the real victims of your measures against us here are the poor, who live hand to mouth.
၂၁ ရာစုမှာ Super Power ဖြစ်မှာဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Super Power ဖြစ်လာမယ့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အနီးနားမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခံအားမရှိဘဲနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ငွေကြေး အရမ်းချမ်းသာလာပြီးတော့ အင်အားကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အနားမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘယ်လိုမှခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ လူကုန်ကူးခံရတယ်။ ရောင်းစားခံရတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ စီမံချက်နဲ့လည်း လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ခံအား တကယ်ရှိမှပဲ လုပ်ဆောင်လို့ရမှာပါ။ ဒီလိုကိုယ်ခံအား လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၊ ၃၀ တောင် မကြာပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေတွေ ဆိုးရွားသွားနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ဘဲနဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ အချိုးအစားကွာဟမှုကြောင့် တစ်နှစ်ကို သတို့သမီး သန်း ၂၀ လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဘေးမှာ ရပ်တည်နေထိုင်ရတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အန္တရာယ်အများကြီးရှိပါတယ်။
Q:Aung San Suu Kyi has claimed the military government is to blame for its mismanagement of the economy and the IMF has said the same. Besides, the sanctions are explicitly to punish human rights violations.
ဦးတေဇ: China is always being accused of violating human rights, but where are the sanctions against them? As for the champions of these sanctions, why do America and France let Chevron and Total operate here with no restrictions whatsoever? They’re the hypocrites, moralizing while they knowingly swell their government coffers, not China, India, Thailand, Singapore and Korea.
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးအမြတ်ရှိမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရေရှည် ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဒါတွေ တွက်ချက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ အင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့ ပူးတွဲယှဉ်နေထိုင်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
Q: So what are the actual effects of the sanctions in your view?
ဦးတေဇ: One example; if the tourists don’t come, how are the hotel and restaurant workers and the fish and vegetable sellers going to survive? If we can only sell to the Indians and Chinese, in an uncompetitive market, the price of our products falls. That means our peasants, 75 per cent of the Burmese people, go hungry. Look, I come fromabusiness family that lost everything when Ne Win’s socialist government carried out nationalizations. Through my father-in-law, (who was well connected with the military), I started to makealot of money buying the rights to forestry land. By selling the timber, ten dollars soon turned intoathousand. All I had to do was respect the laws of the country that had given me this chance to get rich. It’s not for me to decide if they are good or bad. For me, they were good.
အရေးအကြီးဆုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် နောက် ၃ နှစ် ၄ နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတည်း ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နေရာကနေ အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအဖြစ် publicize လုပ်ပစ်မယ်လို့ဆိုတာကို ဒီနေရာကနေ ကတိပြုပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဒီအောင်မြင်မှုတွေ၊ ဒီငွေကြေးတွေမရခင်က ကျွန်တော်တို့ လူသုံးယောက်နဲ့ပဲစခဲ့တာပါ။ ဒီအောင်မြင်မှုတွေ၊ ဒီငွေကြေးတွေ ရရှိခဲ့မယ်လို့လဲ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်စီးပွားရေးနဲ့ ငွေရှာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ငွေအများကြီးရလာမယ်လို့လဲ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တာဟာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပဲ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိနေတဲ့ ပြည်သူလူထု ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတ်၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့ News Media တစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် publicize အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့ဆိုတာကို ဒီနေရာက အာမခံပြောကြားလိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ ၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ညီညွတ်မှုက သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအရ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့က အမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အရာအားလုံး ကို လုပ်ဆောင်ပြီးတော့ နိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လာတဲ့သူတွေရော၊ အစိုးရရော၊ သက်ဆိုင်ရာ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရော ကျွန်တော်ဒီနေရာက တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
When did you begin your career, which brought you so close to the military regime at suchayoung age?
ဦးတေဇ: I started out with nothing and worked 14 hoursaday from 1988. That was the year the student uprising was put down. It did, however, mark the end of General Ne Win’s socialism. I tried to figure out the opportunities that were opening up and it wasn’t for me to pass judgement on military rule, which had been with us since the time of the monarchy. In the 1990s, everyone was invited to invest, creatingamore open economy and Chevron and Total stepped in. That’s what infuriates me about the sanctions. How am I to blame? For becomingamulti-millionaire? I’ve been one since 1996, but to buy my first concessions I had to sell my house and car and risk every kyat that I had. I can afford to retire now, and I may even do that. That’s why I can speak about all this without thinking about what’s in it for me. I say to the Americans–come and see Myanmar [Burma] and have faith in its opening up, don’t just swallow the nonsense invented by the CIA. There isarace on and, mark my words, we have resources that are unique in the world. Education is the only thing we lack. Once, our elite used to study in America and England. Today, all we have are Russian schools.
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဟာ မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်အရေးပါသလို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အနနဲ့ အရေးပါတယ်ဆိုတာကို Eleven Media Group အနေနဲ့ အခိုင်အမာသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ အခု ကြွရောက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးမှာ မိမိတို့အရည်အချင်းနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေ၊ မိမိတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ၊ မိမိတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှတ်ကျောက် တင်နိုင်တဲ့သူတွေဟာ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီး အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်သူတွေလို့လည်း ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဖိတ်စာမှာကို ဂုဏ်ယူလေးစားစွာနဲ့ ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတင်ပြချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နောက်လာမယ့် အနှစ် ၂၀၊ ၃၀ အတွင်း အဓိကရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ့် ပြဿနာနှစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၁ ပြဿနာကတော့ Human Resources ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာနိမ့်ကျခဲ့ တဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Human Resource ပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲ တွေသိမှာပါ။ ကိုယ်အင်တာဗျူးလုပ်ရင် အင်တာဗျူးလုပ်ရမယ့် အရည်အသွေးမီတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်များရပါသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ သတင်းမီဒီယာမှာကို အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံကိုတောင်မသိတဲ့သူတွေ အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသက် ဘယ်လောက်မှာ ကျဆုံးသွားလဲ ဆိုတာမပြောနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါလက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ သတင်းထောက်လောကမှာကို ဒီလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မကျွမ်းကျင်မှုတွေက နယ်ပယ်အသီးသီးမှာပြန့်နေပါတယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ၊ တကယ်ထူးချွန်တဲ့သူ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။ တကယ် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူ တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Working Force တွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။ အခုလယ်တွေထဲမှာ လုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာတွေ့နေပြီ။ အလုပ်ကြမ်းသမားရှားပါးတဲ့ ပြဿနာတွေ့နေပြီး တောရွာတွေမှာ တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ကောင်းတွေမရှိတော့ဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ၃၀ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ လူဦးရေလေးသန်းရဲ့ခြောက်သန်းကြား နိုင်ငံခြားကို ရောက်နေပြီး တချို့က နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရေးကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံကို စွန့်ခွာသွားကြတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ သေးတယ်လို့ဆိုရပေမယ့် တကယ်နိုင်ငံကို ကြီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ဒီပြဿနာဟာ အရမ်းကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကို ရောက်နေတဲ့သူတွေ မပြန်လာဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ထူထောင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဥပမာ- နမူနာအားဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ သူတို့နိုင်ငံက ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ပြန်လာနိုင်အောင် အခြေအနေကောင်းတွေ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီမှာရှိတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ရုံတင်မကဘဲ နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ပြန်လာနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးပေး ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကို မလွှဲမရှောင်သာဘဲ ထွက်ခွာသွားရပေမယ့် ပြန်လာချင်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ဆီမှာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ Human Resources ပြဿနာကို နှစ်ပေါင်း ၂၀၊ ၃၀ အတွင်းမှာ တက်လာမယ့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာစဉ်းစားရပါမယ်။
အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအရ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့က အမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အရာအားလုံး ကို လုပ်ဆောင်ပြီးတော့ နိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လာတဲ့သူတွေရော၊ အစိုးရရော၊ သက်ဆိုင်ရာ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရော ကျွန်တော်ဒီနေရာက တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီး တိန့်ရှောင်ဖိန် ပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းလိုပါပဲ။ ‘ပြတင်းတံခါးတွေ ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါ၊ သန့်ရှင်းတဲ့လေရဲ့အတူ ခြင်တွေ၊ ပိုးမွှားတွေ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်’။ ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ တိန့်ရှောင်ဖိန်စကားကို ထပ်ဖြည့်စွက် ပြီးပြောရရင် ပိတ်ထားတာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့တံခါးကို ဖွင့်မယ်ဆိုရင် လေကောင်းလေသန့် နဲ့အတူ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးမွှားတွေဝင်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ မပိတ်ဘဲနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် လုပ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် နည်းနည်းလေးပဲ ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ လေကောင်းလေသန့်မရဘဲ ခြင်၊ ယင်။ ပိုးမွှားတွေပဲ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုလည်း တိုက်တွန်းချင်တာက တံခါးကို ရဲရဲတင်းတင်း ဖွင့်လိုက်ပါ။ နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာကနေ ရဲရဲကြီး ကာကွယ်သွားမှာပါ။ ရဲရဲတင်းတင်း ဖွင့်တဲ့တံခါးတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကိုအားလုံး ကူညီသွားဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
စာကြွင်း ။ ။ ဒီပို့စ် က ဓါတ်ပုံမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။း)
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, June 10, 2011
အင်္ဂလိပ်လို ပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အင်တာဗျူးတော့ ဖတ်ဖူးတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ပညာရေးအပေါ် မြင်တာကို တော့ သဘောတူပါတယ်၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေ အရေးကြီးကြောင်း သိနေကြဖို့က တကယ်လိုအပ်ပါတယ်၊ အကောင်အထည် ပေါ်လာဖို့ ဆိုတာက သိမှုကနေ အခြေခံမှ ဖြစ်မှာကိုး..၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ မ,ကောင်းမွန်ဝင်းရေ...။
I haven't read both interviews.Thank you so much,Kaung.Dr.Than Htut Aung and i were same high school produts.We were class mate at regional college.Nobody can deny about natural and human resources,the importance of education .......what he said in our country.Tks again.
ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ နောက်ဆုံးစကားလေး သဘောကျလိုက်တာ
“ဒါကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုလည်း တိုက်တွန်းချင်တာက တံခါးကို ရဲရဲတင်းတင်း ဖွင့်လိုက်ပါ။ နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာကနေ ရဲရဲကြီး ကာကွယ်သွားမှာပါ။ ရဲရဲတင်းတင်း ဖွင့်တဲ့တံခါးတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကိုအားလုံး ကူညီသွားဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။”
အယူအဆ မတူ ရင်တော့လည်း ကျွန်မ အတွေး တိမ်တယ်လို့ သာ မှတ်ပါနော်။
ကျွန်မလည်းဖွင့်စေချင်တယ် ။ ဖွင့်တဲ့အခါ နိုင်ငံသားတွေ အတွက် ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေတစ်ခုနဲ့ ပေါ့ . ခုချိန်ထိ ပိတ်ခံထားရတဲ့အတွက် နည်းပညာ အသိပညာမှာ နောက်ကျနေကြတဲ့ ပြည်တွင်းက SME သို့ မဟုတ် micro firm တွေအတွက် .. က အကယ်၍ နိုင်ငံခြားက အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာရင် အောက်ခြေ လူတန်းစားရဲ့ အလုပ်လက်မဲ့နှန်းတော့ လျှော့သွားမယ် တစ်ဖက် က အသေးစားတွေတော့ ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်။ ဂျပန်ဟာ ပြန်ထူထောင်ချိန်မှာ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ညီမ ရဲ့ အင်တာဗျူး မျှဝေချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ အမမျက်လုံး ထဲမှာ တော့ ဘာ resources မှ အကောင်း မရှိတော့ဘူး လို့ ထင်တယ် အများကြီး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု့ တွေ လုပ်နိုင်မှ နဲနဲလောက် သက်သာမယ်
ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူး ...